आज उम्मेदवारी दर्ताः चितवनमा केन्द्रीय नेताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
आज उम्मेदवारी दर्ताः चितवनमा केन्द्रीय नेताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा
२०७० आश्विन १७, बिहीबार ०२:१० गते
भरतपुर । मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनका लागि आज बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता हँुदै छ । वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीको विरोधमा पनि निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रमअन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता हुन लागेको हो । केही विवाद र मतमतान्तरका बीच पनि दलहरुले चितवनमा आआफ्ना उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म समय छुट्टाएको छ । निर्धारित समयभित्रै उम्मेदवारी दिन दलहरुले आफ्नो पार्टी कार्यालयबाट एकैपटक कार्यकर्ताका साथ उम्मेदवारहरु निर्वाचन कार्यालय पु¥याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको भरतपुर चितवन मेडिकल कलेज अगाडिस्थित कार्यालय, कांग्रेसको नारायणगढ कमलनगरस्थित कार्यालय, एमालेको भरतपुर १० मदननगरस्थित कार्यालयमा कार्यकर्ता जम्मा भई उम्मेदवारी दर्ता गराउन आउने योजना बनाइएको छ । माओवादीले र एमालेले ११ बजे आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएका छन् भने कांग्रेसले १२ बजे कार्यकर्ता बोलाएको छ ।
कार्यकर्ता जम्मा भएपछि आफूहरुले उम्मेदवारसहित गएर उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी पार्टीहरुको छ । साना पार्टीहरुले पनि चितवनमा आफ्ना उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका छन् । राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेलगायतका दलहरुले पनि आफ्नो उम्मेदवार चयन गरी उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरिरहेका छन् । मधेसवादी केही दलहरुले पनि चितवनमा आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ताको पहल गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव जितनारायण श्रेष्ठले पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई जिताउने योजनाका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराउन लागिएको बताउनुभयो । ‘हामीले पार्टी कार्यालयदेखि कार्यकर्ताका माझमा उम्मेदवार राखेर निर्वाचन कार्यालय लगि उम्मेदवारी दर्ता गराउने छांै’, सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
माओवादीका जिल्ला नेता सुदर्शन पौडेल प्रज्वलका अनुसार पार्टी कार्यलयमा कार्यकताहरु जम्मा भएर एकैपटक उम्मेदवारी दर्ता गराउने योजना भइरहेको छ । ‘विगतको जस्तै उत्साहले उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी भइरहेको छ ’, उहाँले भन्नुभयो ।
‘हामी सबै उम्मेदवारको एकैपटक उम्मेदवारी दर्ता गराउँछांै’, उहाँले भन्नुभयो । एमालेले पनि एकैपटक उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ । एमाले चितवनकी उपसचिव रहनुभएकी क्षेत्र नं. ४ कि उम्मेदवार पार्वती रावलले पार्टीको निर्णयअनुसार सबै नेता कार्यकर्ता जम्मा भएर उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला चितवन ४, एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे चितवन क्षेत्र १ र एकीकृत नेकपा माओवादीका पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल ‘आहूति’ क्षेत्र नम्मर २ र नेता अमिक शेरचन क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवार बन्ने भएपछि चितवनमा चुनावी माहोल तातेर गएको छ ।
क्षेत्र नं. ५ मै राप्रपाका महामन्त्री विक्रम पाण्डेको उम्मेदवारीले पनि यो वर्ष चितवनमा केन्द्रीय नेताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको देखिन्छ । चितवनका सबै उम्मेदवारहरु बुधबार साँझसम्ममा चितवन आइसकेका छन् भने कोइरालाको जिल्ला सभापति टेकप्रसाद गुरुङले वारेश नामा लिएका छन् । विक्रम र अमिकबाहेकका अन्त केन्द्रीय नेता चितवनबाट पहिलो पहिलो पटक उम्मेदवार हुन लागेका हुन् ।
को–को उठ्ने :
क्षेत्र १ – संगीता भट्टराई रेग्मी
क्षेत्र २ – विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’
क्षेत्र ३ – नारायण दाहाल
क्षेत्र ४ – चित्रबहादुर श्रेष्ठ
क्षेत्र ५ – अमिक शेरचन
क्षेत्र १ – राजेन्द्र बुर्लाकोटी
क्षेत्र २ – शेषनाथ अधिकारी
क्षेत्र ३ – भीमबहादुर श्रेष्ठ
क्षेत्र ४ – सुशील कोइराला
क्षेत्र ५ – सबिता बराल
क्षेत्र १ – सुरेन्द्र पाण्डे
क्षेत्र २ – कृष्ण खनाल
क्षेत्र ३ – कृष्णभक्त पोख्रेल
क्षेत्र ४ – पार्वती रावल
क्षेत्र ५ – दानबहादुर तामाङ